ကြေးမုံလေးတို့အမျိုး တရုတ်ကြီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ… !@#$ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကြေးမုံလေးတို့အမျိုး တရုတ်ကြီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ… !@#$
ကြေးမုံလေးတို့အမျိုး တရုတ်ကြီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ… !@#$
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 14, 2012 in Myanma News, Opinions & Discussion, World News | 29 comments
ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း စာမျက်နှာမှာ “ရှားပါးသတ္တုပစ္စည်း တရုတ်တို့ကန့်သတ်မှု WTOကိုတိုင်ကြား” ဆိုတဲ့သတင်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဘီဘီစီ မြန်မာစာလုံးက ဇော်ဂျီစာလုံးမဟုတ်လို့ တိုက်ရိုက်ကူး တင်လို့မရဘူး။ အဲဒီထဲက ပြောချင်တာလေးကို ကောက်နှုတ်လိုက်ပါတယ်။ http://www.bbc.co.uk/burmese/news/2012/03/120313_rare_earths_complaints.shtml
“တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှားပါးတဲ့ သတ္တု၉၅% ထိကြွယ်ဝတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတ္တု၁၇မျိုးကို အိုင်ဖုန်းနဲ့ လျှပ်စစ်ကားလို ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အသုံးချပါတယ်။ အနှုတ် အသိမ်းအယူ အများဆုံးက အမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်က အဲဒီသတ္တုတင်ပို့တာကို ထိန်းချုပ်ပြီး ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်မှာ ဈေးနှုန်းတက်အောင် လုပ်နေတယ်လို့ အမေရိကန်က စွတ်စွဲထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကလည်း ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနဲ့အညီ ထိန်းချုပ်တာလို့ တုံ့ပြန် ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ တွင်းတူးမှုတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးရတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေ ထားရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီရှားပါးသတ္တု တူးဖော်ရတာ ခက်ခဲတယ်၊ အဆိပ် အတောက်တွေ ထွက်ရှိပြီ ရေဒီယို သတ္တိကြွမှု အန္တရာယ်တောင် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတ္တု တတန်ရဖို့ မြေဆီ စတုရန်းပေ ၃၀၀၀ကျော် ပျက်စီးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မနှစ်က သတ္တုတန် ၃၉၀၀၀ကျော် ထုတ်ခဲ့ရာက နောက်ကို တန်၃၀၀၀၀ကျော်အထိ လျှော့ချထုတ်လုပ်ဖို့ တရုတ်က စီစဉ်နေပါတယ်။ အခုတိုင်ကြားမှုဟာလည်း အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ပူးတွဲတိုင်ကြားမှု ဖြစ်ပါတယ်။”
ကြည့်စမ်းပါအုံး.. တရုတ်ကြီးက သူ့တိုင်းပြည်ကြတော့ သိတတ်လိုက်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှာ စိုးသတဲ့.. မြန်ကျင့်တို့တိုင်းပြည်ကြတော့ အသက်သွေးကြော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပိတ်ပြီး ရေကာတာ ဆောက်ချင်သတဲ့.. တူးလိုက်တဲ့ ရှားပါးအဖိုးတန် သတ္တုတွေဆိုတာ မပြောနဲ့.. တောင် အလုံးလိုက် ဖြိုတူးကြတယ်.. ခုတ်လိုက်တဲ့ သစ်တောဆိုတာလည်း ရိုးမတောလုံးပြုတ်ပဲ..။ ဘာလဲကွ မြန်ကျင့်ဆိုတဲ့ မြန်မာတွေက လူမဟုတ်လို့လား…။ မင်းတို့လူမျိုး မင်းတို့တိုင်းပြည်ပဲ တန်ဖိုးရှိပြီး မြန်ကျင့်တို့တတွေက မင်းတို့ကို ကျွန်ခံဆပ်ဖို့လား..။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိသမျှ တွင်းထွက်သယံဇာတ တွေကို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားလာတာ နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်ပြီ။ အဲဒီထဲမှာ တရုတ်အဆိုးဆုံးပဲ၊ ဘာများ မယ်မယ်ရရ တိုင်းပြည်က ပြန်ရတာရှိသလဲ… တရုတ်ကြီးကို အကြွေးဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်းများစွာ တင်တာပဲ အဖတ်တင်ကျန်တယ်။ ရွာသားများလည်း လက်ပိုက်ကြည့်မနေဂျပါနဲ့… မြန်မာပီပီ သတ္တိ ပြကြပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သလို ခြေလက်မအားရင် ခေါင်းနဲ့တိုက်ပါ၊ ခေါင်းမအားရင် သွားနဲ့ကိုက်ပါ။ သွားမအားရင် ကြေမုံတို့အမျိုး တရုတ်ကြီးကို ဝိုင်းဆဲဂျပါ။ ကြေးမုံလေးတော့ မပါစေနဲ့… သူ့ကို ကြောင်ကြီးအတွက် ထားလိုက်..။
ရှလွတ်ရှလွတ်လို့ လျှာနဲ့လျက်ပြီး တဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ဝါးစားမည့် ကြောင်ကြီး
ဟေ့ကောင်တရုတ်မိုက်ရင် ကြောင်ကြီးနဲ့တပွေချင်း ပြိုင်ကိုက်ပါလား
ဦးကြောင်လို အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေ လိုအပ်နေတယ်ဗျ
သွေးစုပ် ဖုတ်ကောင် သောက်တရုတ်တွေ !@#$!@#$!@#$
အော်..သူများနိုင်ငံတွေများ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက်များ သူများဆီကပစ္စည်းတောင် စားမာန်ခုတ်ကြတယ်..
ငါတို့ဆီက Aပေးခေါင်းဆောင်တွေမတော့ သူ့တို့ပထွေးကဘာလုပ်လုပ် ကျေနပ်ပီးသားပဲ.. :angry:
နင်တို့တရုတ်ထီးတွေကို မကြီးမိုက်တို့ မိဖြဲတို့ မိအံတို့ကို လက်စားချေခိုင်းမယ်..
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော့ တရုတ်မတွေကို အပြတ်ချေမယ်…
အခုတော့ ဘာမှမအားသေးလို့ !#@%!~$#!%#!
ဟွန့် နာတို့ကျတော့ တရုတ်ထီးတွေတဲ့
ဒါဆို နာတို့က ပြည်မကြီးထဲက တရုတ်မတွေကို အပြတ်ချမယ်
လာပြီ ဖကြီးအံ( ဖရဲကြီးမိုက်အံဇာ) အဖွဲ့ကွ
အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲဟင် …..
နာလည်း အဲလို ဆဲချင်လို့ ….
သဂျီး မသိအောင် တိုးတိုးပြောနော် ..
“ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးရတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့” ဆိုတာက
ငြင်းမကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တခု ထိုးပြလိုက်တာဗျ….။
တကယ်တော့ တရုတ်က မဆင်းရဲတော့ဘူး
မြေကြီးထဲတူးပြီး သူများရောင်းစားရမယ့်ဘ၀က လွတ်သွားပြီ..။
ဒီတော့ ရှားပါးသတ္ထုကို ရောင်းရင်ရမယ့်အကျိုးနဲ့ သူများမရောင်းပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသုံးရင် ရမယ့်အကျိုးကိုချိန်ပြီး နိုင်ကွက်နင်းတာလို့ထင်မိပါတယ်။
ယနေ့မှ စ တရုတ် ပစ္စည်းများကို သေချာစီစစ် ပြီးသကာလ
အားပေးသင့်/ မသင့် စဉ်းစားတွေးခေါ် ချင့်ချိန် ပါတော့မည်….။
တရုပ်ဆိုင်မှ အစားအစာများ… … အဲ … ဒါ လဲ ….ဂလု ….
စဉ်း … စား…..ရ ….မည် … ဖြစ်….ပါ….ကြောင်း…..ဂလု….။
Burmese or Chinese က တရုတ်စစ်စစ် ပါ ဒါပေမဲ့ ……….
ဒီမြေကိုထိလာရင်တော့လုံးဝ(လုံးဝ)လက်မခံတဲ့ တရုတ်ပါ။
ဆဲတယ်ဗျာ..တရုတ်ကြီးကို.. :red: #*_+|><%@#!!#$%*&+/။
Burmese or Chinese မပါ..
တရုတ်ကြီးက သူ့တိုင်းပြည်ကြတော့ သိတတ်လိုက်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှာ စိုးသတဲ့.. မြန်ကျင့်တို့တိုင်းပြည်ကြတော့ အသက်သွေးကြော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပိတ်ပြီး ရေကာတာ ဆောက်ချင်သတဲ့.. တူးလိုက်တဲ့ ရှားပါးအဖိုးတန် သတ္တုတွေဆိုတာ မပြောနဲ့.. တောင် အလုံးလိုက် ဖြိုတူးကြတယ်.. ခုတ်လိုက်တဲ့ သစ်တောဆိုတာလည်း ရိုးမတောလုံးပြုတ်ပဲ..။
သဂျီးက ဆဲခွင့်မပြုပါဘူးဆိုမှ ဦးကြောင်ကအချွန်နဲ့မနေပြန်ပြီ @#@
မြန်မာပြည်တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ အေးချမ်းသာယာပါစေ ….
တရုတ်တွေ မြန်မြန် ကျဆုံးပါစေ။မြန်မာပြည်သူ အပေါင်းလည်း တရုတ်နှိပ်စက်ခြင်း၊နိုင်စားခြင်း။ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း။အစိုးရ တရုတ်ကြောက်ရခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ။
တရုတ်တွေ မြန်မာပြည် ကို ဒုက္ခပေးတာ များနေပြီး။မြစ်ဆုံကိစ္စ လုံးဝလုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ ဘာစီမံကိန်းမှမလုပ်ပါနဲ့
တရုပ်လူလည်တွေ။ သူများနိုင်ငံကျ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးပေါ့။ ဆဲလိုက်မယ် ခွေးသူတောင်းစား တွေလို့။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က ဘာတွေကို ပေါက်ပြီး ဘာတွေဖော်ကာ..
ဘယ်လိုတွေ မနေတယ်ဆိုတာတော့ အားလုံးသိကြတယ်မဟုတ်လားး
ဒါနဲ့များ သူ့တိုင်းပြည် ကျတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှာလေးဘာလေးနဲ့…
သြော်…. ကျလည်းးကျဖို့ ကောင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်းကောင်းးးရယ်…..။
ဒေါ်စုတစ်ခါပြောဘူးတယ်လေ တရုပ်တွေကို မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရှာဖို့အမြင်တစ်ခုထဲနဲ့မကြည့်ဖို့။
တရုပ်က ရုပ်ချက်ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့တောင်မျိုးတုံးအောင် လုပ်ကြတာ။ သားဆက်ခြားပီးတော့လေ….
မြန်မာပြည်ကို.. မြေပုံကနေဖဲ့ထုတ်ပြီး.. ပစ္စစ်ဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ်… သွားချလို့မရတာမို့.. ချိုင်းနားလို စူပါပါဝါလှမ်းလာတဲ့ ..အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်နဲ့..အတိုက်အခံသွားလုပ်နေလို့.. တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမများဘူးထင်မိတယ်..
ချိုင်းနီးမိန်းကလေး.. ဖြူဖြူလေးတွေမြင်ရင်… မနေနိုင်တဲ့ပုံကိုး…
ဘီဘီစီကရေးတဲ့.. “ရှားပါးသတ္တုပစ္စည်း” ဆိုတာ.. Rare earth element လားထင်မိတယ်..
စကားအတင်းစပ်ပြောရရင်.. မြန်မာပြည်ဟာ..ရှားရှားပါးပါး.. အဲဒီ Rare earth element ထွက်နေပုံပေါ်ပါတယ်…
စီးပွားရေးကစားတတ်ရင်.. ချိုင်းနားက.. ဈေးဝယ်လက်ကောင်းကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
ယူအက်စ်. ချိုင်းနား.. ဂျပန်တွေကို လှည့်ကစားသင့်တာပေါ့…
တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားရဖို့.. ဦးတည်ပြီး… အထူး(အထူး) အာရုံစိုက်လုပ်သင့်တယ်..ထင်ပါကြောင်း…။
တစ်ကယ်တမ်းဆန်းစစ်ကြည့်တော့ အဲဒိပေါက်ဖော်တွေထက် လုပ်ချင်ရာလုပ် ငါကောင်းစားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ ပြည်တွင်းက ပထွေးရှာတဲ့ကောင်တွေကို သတ်ပစ်သင့်တာ…။ ဟိုအကောင်တွေကတော့ သူတို့လိုချင်တာရရင်ပြီးရော…… ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လုပ်သွားမှာပဲ…။ ဒါကို ဘာလို့ လုပ်ခွင့်ပေးလည်း …။ လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ကောင်တွေ 63 မကျတာ…။ အဲဒါတွေခုလောလောဆယ်ရှင်းရင်ရှင်း…။ မရှင်းနိုင်လို့ အုံကြွလာရင်တော့ ဟင်းးးးးးဟင်းးး သိတယ်နော်…။
ဝေး ၀ိုင်းဆဲကြစို့ ..!@#$!@#$!@#$!@#$
ဆဲပြီးပါပြီ .. ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟင်င်င်င်င်ငင်င်င်ငင်င်င်ငငင်င… :grin: :grin:
ကိုကြောင်ရေ အဲဒီသီတင်း ဧရာဝတီမှာဖတ်ပြီး တောက်ခေါက်နေရတယ်ဗျာ
တော်တော်လည်တဲ့ တရုတ် သူ့အလှည့်ကျမှ နာပါပြီ အော်နေတယ် အနောက်အုပ်စုရေ ဆက်သာလုပ် လက်ခုပ်တီးနေမယ်
တီလုပ်ကြီး ကို ဆဲရမတဲ့လား …
အင်း ….မောင်လေးမိုးဂုတ်ပြောသလို သဂျီးက ဆဲရ၀ူးတဲ့ …
ဟိုတယောက်ပြောတော့ …ဂဘာဂျီးကို တီလုပ်ကြီးပိုင်တာဆို….
သဂျီးက သူများမကောင်းကြောင်း မီရေးရဘူးဆို….
ကျုပ်က ဘာများပြောရပါအံ့နည်း ….။
အို ..ကြာဘာဒယ်… ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ဆဲတော့မယ်… မီးဒုတ်ရှို့တော့မယ်..
(ဟဲဟဲ …ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသမရဘူးလို့ ..စည်းကမ်းမှ ထုတ်မထားတာ ..
ဟုတ်တယ်နော ..ဒီမိုသဂျီး ….)
ခင်ဗျားကိုယ်ထဲမကော ကျုပ်ကိုယ်ထဲမကော တီလုပ်သွေး အနည်းငယ်၊ ဒါမှမဟုတ်
တ၀က် ဒါမှမဟုတ် အတော်များများ လှည့်ချင်လှည့်နေလိမ့်မပေါ့…ဒါပေသိ
ဟေ့ ဘိရုမာ ဟာ ဘိရုမာပေါ့ကွ…
ဘိရုမာနဲ့ ကုန်သွယ်တဲ့အခါ အနိုင်ကျင့်သော ခေါင်းပုံဖြတ်သော ..မမျှတသော
ကိုယ်အသာ ယူသော တိုင်းပြည် တီလုပ်သော …ကီလားသော….ယပက်လက်သော
မီးဒုတ်ရှို့ ရမှာ ဘိရုမာ တာဝန်ပေါ့ကွာ….
အမြန်ဆုံး ခွချက် မိပြီး ခွက်ချ နိုင်ပါစေ….
မြန်မာပြည်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ တီလုပ်ကြီး ကောင်းကြောင်း (မကင်းနိုင်ကြောင်းလက်ခံပေမယ့်)
တီလုပ်ကြီးကြောင့် မသေသယောင် တီလုပ်ကြီးကိုပဲ ထိုင်ကျေးဇူးတင် ရှိခိုးရမယောင်များ
(မြန်မာစာနဲ့) ရေးမိလို့ကတော့ …
သများကို harakiri လာလုပ်စမ်းဘာ….
ဒါမှမီဟုတ်လည်း …ဇက်ကနေသာ တချက်တည်း ပိုင်းထလိုက်ဇမ်းဘာ…
သိပ်မပြောဂျပါနဲ့ဗျာ… ကြေးမုံလေး ကျုပ်ကို စိတ်ဆိုးသွားအုံးမယ်..။ သူ့ဆီက အဖြေရကာနီးမှ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် မဝေးပါရဇေနဲ့..။
မီးစ တစ်ဖက်၊ ရေမှုတ် တစ်ဖက်
မပြောတော့ဘူး။ မပြောတော့ဘူး။ ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး။ ;-)
တို့ တရုပ်ပြည်တက်သိမ်းရအောင် မဟာလက်နက်ဆန်း ဂျင်ဂလိနဲ့ လောက်လေးခွ ဆက်သစမ်း မောင်မင်း